Ukuba ubungafuni uluvo lwam, bekungafanelekanga ukuba ubuze! | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 28, 2008 Douglas Karr
Enye yezinto ezintle malunga nento endiyenzayo kukuba indibeka kunxibelelwano nezinye iinkampani endakha ndasebenza nazo okanye ndenzela zona. Namhlanje ndifumene iindaba ezimbalwa ezaziphoxa, nangona kunjalo.
Malunga nenyanga edlulileyo, ndichithe iiyure ezimbalwa ndizalisa uphando olubanzi ebeluthunyelwe kum lusuka kwenye yeenkampani ebendizisebenzela kwaye ngoku bendisebenza ukudibanisa kunye nokuthengisa kwakhona. Ndayiphalaza intliziyo yam kwinkampani xa ndandilapho kwaye ndisabathanda abantu babo kunye neemveliso zabo kunye neenkonzo ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, izizathu ezifanayo zokuba ndishiye inkampani iqhubekile nokuvela njengoko sisebenzela ukuthengisa iqonga- imbonakalo yokuqunjelwa, ukunqongophala kweempawu, iindleko eziphezulu, njl.
Ndisibonisile isimemo sophando kwibhokisi yam engenayo ukuze ndiphendule kuvavanyo xa ndinokuchitha ixesha. Kamva ngobo busuku nangomso olandelayo, ndichithe iyure enye okanye ezimbini ndiphendula uphando. Ngomhlaba ovulekileyo wokubhaliweyo, ndandingqale kwaye ndiye kwinqanaba lokugxeka kwam. Emva kwayo yonke loo nto, njengomthengisi, ukuphuculwa kwemveliso yabo bekukho my Umdla omkhulu. Khange nditsale nayiphi na inqindi kwaye bendiphambili kakhulu kwinto endiziva ukuba yeyona nto iphambili ukuba yiyo. Ndikhuphe netalente eyishiyileyo inkampani - baphulukene nabasebenzi abaninzi abalungileyo.
Nangona olu phando belungaziwa, bendisazi ukuba bekukho abakhombisi abalandelayo kwinkqubo yokungeniswa kwaye izimvo zam ezichanekileyo zinokuchongwa ngokulula yinkampani njengam. Khange ndikhathazeke ngayo nayiphi na impembelelo, babebuzile uluvo lwam kwaye ndifuna ukubanika.
Ngomdiliya namhlanje (kukho usoloko ungumdiliya), Ndafumanisa ukuba amazwi am ayephindaphindiwe kwinkampani kwaye, ngamafutshane, andamkelekanga ukusebenza nenkampani ukuqhubela phambili nabuphi na ubudlelwane.
Isiphumo, ngokoluvo lwam, sinokubona okufutshane kwaye asikakhuli. Ukuba akukho mntu ufikileyo kum ngokobuqu ubonisa ukunqongophala kobuchwephesha ngokunjalo. Ngombulelo kum, baninzi kakhulu ababoneleli beenkonzo kwimarike abanokubonelela ngento endiyifunayo ngemali encinci kakhulu kwaye kulula kakhulu ukudibanisa. Bendinethemba lokunceda inkampani yam yakudala ngokunikezela ngengxelo entsha, ethembekileyo.
Ukuba bebengafuni uluvo lwam, akwaba bebengazange babuze. Ngendisindisile iiyure ezimbalwa zexesha lam kwaye akukho mntu uziva ebenokwenzakala. Akukho zinkxalabo, nangona. Njengoko benqwenela, andiyi kwenza nto ukuqhubela phambili naluphi na ubudlelwane kunye nabo.
tags: fumana ibhokisiisilulekoUlawulo lwezindululoukukhangela iibenchmarks
Oktobha 28, 2008 ngo-3: 25 PM
Inye into ekufuneka uyicingisise apha kukuba iindaba ozivileyo zisemthethweni okanye ngamarhe nje. Ii-ofisi ziindawo ezimanyumnyezi zokusasaza amarhe, kunokwenzeka ukuba abantu abaphonononga ungeniso lwakho bavele batsibe kwaye bathethe izinto ekungafanelanga ukuba babe nazo, kwaye umntu okufutshane ubevile kwaye wakuthatha njengomgaqo-nkqubo osemthethweni. La mahlebezi ke agqwetheka kwaye aguquka asuka kwimeko nje yokumamela into embi kakhulu.
Ewe yintelekelelo nje leyo 🙂 Kwakhona kunokwenzeka ukuba unqanyulwe kuyo nayiphi na inkampani ekuthethwa ngayo othetha ngayo.
Kodwa ndicinga ukuba umbuzo endiya kuzibuza wona okwangoku ngowokuba – ingaba ndiyakhathala? Ukuba uneemvakalelo ezibuhlungu malunga nale nkampani (evakala ngathi wenza kwiposti yakho), ngaba ufuna ngokwenene ukuqhubeka nokusebenza nabo?
Oktobha 28, 2008 ngo-6: 40 PM
Enkosi ngengxelo entle, Christian. Ngokuqinisekileyo ngendingazange ndithumele ukuba bendinokuthandabuza malunga nokuba ngamarhe okanye yinyani. Ngokwenene, yinyani.
Isifundo kuyo nayiphi na inkampani sesokuba, ukuba awukakulungeli ukufumana ingxelo embi kakhulu, musa ukuthumela uphando oluyicelayo!
Oktobha 28, 2008 ngo-8: 48 PM
Sisiphi isifundo osifundileyo?
Oktobha 28, 2008 ngo-9: 25 PM
Ross, leyo inokuba lolona phawu lubalaseleyo. Ndicinga ukuba into endiyifundileyo kukuba iinkampani ezininzi zithembisa kuphela ukuthembeka kwidola hayi abasebenzi babo okanye abathengi babo.
Andinamasheya enkampanini kwaye andibatyala kwanto, ngoko ke andifanelanga ukuba ndiyithathele ngqalelo lento. Ndiza kuyiphelisa ngokukhawuleza ngokwaneleyo kwaye ndifumane inkampani efuna ukumamela.
Oktobha 29, 2008 ngo-2: 18 PM
Ndicinga ukuba eyona ngxaki kukuba inkampani ayiliqondi ixabiso lokufumana impendulo ethe ngqo, ebetha nzima. Njengoko uDoug watshoyo, ukuba awunamdla wokuva okuhle nokubi, ungaze ubuze umntu onokuthi anyaniseke kuwe. Ukuba yonke into oyifunayo ilungile, ilungile, ishushu, impendulo engaqondakaliyo. Emva koko ukhethe ngesandla abathengi / abathengi ofuna impendulo kubo, ubafowunele kwaye ubabuze "Yintoni oyithandayo ngathi?" Umbuzo omnye, yiloo nto, kuba eneneni yonke loo nto ivakala ngathi unomdla wokwenene wokuva.
Ulibale ngento yokuba unokuba nomthengi owaziyo kancinci malunga nenkonzo ozama ukuyithengisa kunye nokuba kuthetha ukuthini ukusebenzisa amandla ayo apheleleyo. Umthengi ongamhoyiyo usenokuba ngulowo ukrelekrele ngokwaneleyo ukwazi ukuba yeyiphi imibuzo ekufuneka ibuzwe ngabo bonke abathengi kwaye hayi kuba i-95% yabo ayazi enye into ngaphandle kokuba ubaxelele ngenkonzo yakho.
Ukuba awufuni ukulungisa okanye ukuphucula oko unako kwaye ukwenze kubengcono, musa ukuchitha ixesha lethu. Zininzi ezinye iinkonzo ezifana nezakho esinokuzenza “inkawu” endaweni yoko.
Oktobha 29, 2008 ngo-3: 22 PM
Nokuba imeko imbi kangakanani na ingxelo ekufuneka inkampani iyithathe njengethuba lokuphucula. Ubanike kanye oko bakucelileyo bafanele ukukuvuyela ukukufumana.
Ukuba bavakalelwa kukuba akuthetheleleki, ungabuhoyi ububi uze usebenzele kokulungileyo.
Lilonke kukuziphatha kakubi kakhulu ukucela uluvo olungachazwanga igama lakho uze ulubambe ngokuchasene nawe.
Kutheni ndiza kumahlukanisa nomntu othengisa imveliso yam kwakhona?
Oktobha 29, 2008 ngo-4: 22 PM
Ndicinga ukuba oku kuzisa umba omkhulu. Iinkampani kufuneka zilumke kwinto eziyithethayo ngabantu abasebenza ngokugqithisileyo kumajelo asekuhlaleni (njengawe). Kufuneka baphathe iiblogi ngendlela efanayo abaza kuphatha ngayo intatheli. Ukuba bafuna uluvo lwakho, kufuneka balusebenzise njengokugxeka okwakhayo okanye bangayihoyi. Eyona nto imbi kakhulu ebebengayenza kukuvumela ukuba ifakwe kwibhlog yakho ukuba bakuphethe ngolo hlobo. Ayibonakali kakuhle kubo konke konke.
Oktobha 29, 2008 ngo-5: 43 PM
Ndicinga ukuba oko kuyinyani ukusa kumlinganiselo othile, Colin. Ngokuqinisekileyo andifuni abantu boyike ukwenza ishishini nam xa kukho into embi eyenzekayo kwaye ndingabhloga ngayo, nangona kunjalo. Njengoko uqaphela ngasentla, andizange ndichaze ukuba ngubani kwaye andisoze ndiyenze loo nto.
Abanye babahlobo bam abasenyongweni basebenzela amashishini kwaye andisoze ndizame ukuwonakalisa ishishini labo – kodwa ndiza kuqhubeka nokunyaniseka xa ndibuzwa.
Okt 30, 2008 ngexesha 12:18 AM
Doug, ndiyaxolisa kakhulu ukuva ukuba oku kwenzekile. Ndiyayibulela kakhulu impendulo yakho. Ngento eyiyo-izimvo zakho zibalulekile kwaye ziyaxatyiswa.
ULinda S Fitzgerald
Feb 15, 2009 ngo-4: 12 PM
Kuyafana naxa umntu ebuza nawuphi na umbuzo, okt “yintoni umahluko phakathi kwe-Indy &. . . . ” Umbuzo wokwenene endiye ndawubuza mva nje. Ndayiphepha impendulo kuba ndandisazi ukuba inoba uyakhubeka kulowo ubuzayo. Nangona kunjalo, xa ibuzwa ixesha le-2, ndaphendula kwaye ndiqinisekile ngokwaneleyo. . . Umceli uye wayifumanisa "iyakhubekisa". Nangona impendulo yayiyinyaniso ngokupheleleyo.
Ukuba asifuni kuva impendulo - kuwo nawuphi na umbuzo - ungabuzi kwindawo yokuqala.